Ntuziaka Ngwudata Weebụ Site na Semalt
Ọkpụkpọ ngwaahịa dị mma maka weebụsaịtị e-commerce na iwepụta ozi sitere na BestBuy, Walmart, eBay, Target na Amazon dị ka weebụsaịtị. Ngwaọrụ a na-enye anyị ozi ziri ezi banyere ngwaahịa gụnyere aha, nkọwa, oyiyi, na ụgwọ. Ọzọkwa, Onye na-ere ihe na ngwaahịa nwere API dị mfe iji rụọ ọrụ yana ihe nchọgharị weebụ ọbụla.
Nchịkọta ngwaahịa dịka ngwá ọrụ mmepụta data kwesịrị ekwesị:
Ọ bụrụ na ị mepụtara ebe nrụọrụ weebụ e-commerce n'oge na-adịbeghị anya, ịnwere ike ịnakọta ozi banyere ndị na-asọmpi gị na ndị na-eweta ọrụ, ngwaahịa, ahịa, na ihe oyiyi ha. Ị nwere ike jiri ebe dị iche iche e-commerce dị ka Amazon, Walmart, na eBay nweta ozi bara uru site na iji Product Scraper. Ngwaọrụ a bụ ihe pụrụ iche n'ihi na ọ na-enye aka tụnyere saịtị e-commerce dị iche iche, nweta nchịkọta ngwaahịa ha, ihe oyiyi, nyocha, na nkọwa ọnụahịa. N'adịghị ka ngwá ọrụ nkịtị ndị ọzọ, ihe ntanetịpụtara ngwaahịa na-enweta data site n'ịgba na iji atụnyere ibe weebụ dị iche iche na ntanetị ma nweta gị nkọwa gbasara ndị na-ere ákwà na ndị na-ere ahịa. Ya mere, anyị nwere ike ịsị na Product Scraper bụ azụ nke ebe nrụọrụ weebụ e-commerce.
Jiri mpempe ngwaahịa iji nyochaa ọnụahịa na ọrụ ndị na-asọmpi:
Ịzụta ngwaahịa dị iche iche n'ịntanetị na asọmpi asọmpi na-abụrịrị ihe ịma aka maka anyị nile. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-enwe mgbagwoju anya banyere ọnụahịa na-agbanwe agbanwe nke ngwaahịa dị iche iche na Ịntanetị. Amazon na eBay gbalịrị ịnọgide na-akwụ ụgwọ na ọkwa dị mma ma na-achọ inweta ọtụtụ ndị ahịa. Maka mmalite, ị nweta ozi ngwaahịa dị ezigbo mkpa. Site na Nchapụta Ngwaahịa, ọ ga-adịrị gị mfe iji ọnụahịa nke ngwaahịa dị iche iche tụnyere ọnụahịa kacha mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ wepụ data site na njem ụzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ e-azụ ahịa, ị kwesịrị ịnwale Onye na-emepụta ihe na ngwaahịa n'otu ntabi anya. Ngwaọrụ a ga-anakọta, hazie ma wepụ data gị n'oge.
Jiri nchịkọta ngwaahịa iji nyochaa ọnọdụ ahịa:
Ụlọ ọrụ e-azụmahịa na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị na-elele ndị ibe ha mgbe nile. Dị ka ọmụmaatụ, Amazon na-elekwasị anya na ngwaahịa ahịa ugbu a ma nata ozi banyere ngwaahịa na ọrụ nke BestBuy na Walmart. Ọzọkwa, ọ na-atụle ahịa na ngwaahịa ha na ya. Ọkpụkpọ ngwaahịa ga-enweta otu ụdị ozi ahụ. Ngwá ọrụ a ga-enye aka inweta ihe ọmụma dị iche iche ma mee ka ị nweta data maka azụmahịa gị. E wezụga nke ahụ, ọ ga-enye ozi gbasara otu ndị asọmpi na-ebupụ ngwaahịa ha na ụdị ụdị ego a na-enye online.
Fatịlaịza nke ngwaahịa na-ezuru ezi ozi banyere ndị na-ebute ngwaahịa:
weebụsaịtị na ahịa ahịa nwere ọtụtụ narị ndị ọrụ nhazi. Site na Nchapụta Ngwaahịa, ị nwere ike ịnakọta ozi gbasara ọtụtụ ndị na-ebu ngwá ọrụ ma nwee ike iji ngwaahịa na ahịa ha tụnyere. I nwekwara ike wepụ data site na Amazon na eBay ma nwee ike ịdọrọ ibe weebụ gị. Ndị na-emepe weebụ na onye mmemme nwere ike ịmepụta sava ndị bara uru na ihe ntanetị ngwaahịa ma nwee ike ịrụ ọtụtụ ọrụ dị mfe.